စီရော်နယ်ဒိုကြောင့် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကို နောက်မှလိုက်ကစားရန် မလိုတော့ ဟု ဘိုနူချီဆို - Yangon Media Group
စီရော်နယ်ဒိုကြောင့် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကို နောက်မှလိုက်ကစားရန် မလိုတော့ ဟု ဘိုနူချီဆို
တစ်ကျော့ပြန်ဂျူဗင်တပ်နောက်ခံလူ ဘိုနူချီက ကစားသမားသစ် စီရော်နယ်ဒိုမှာ အသင်းကို နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုရောက်အောင် ပို့ဆောင် နိုင်မည့်ကစားသမားမျိုးဖြစ်ပြီး ¤င်းရှိနေခြင်း က အနည်းဆုံး ရီးရဲလ်နှင့်ပွဲများတွင် ၁-ဝ ဂိုးအရှုံးဖြင့် နောက်မှလိုက်ကစားရန်မလို တော့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
စီရော်နယ်ဒိုကြောင့် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကို နောက်မှလိုက်ကစားရန် မလိုတော့ ဟု ဘိုနူချီဆိုဘိုနူချီက ”အသင်းမှာ စီရော်နယ်ဒိုကို ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ အနည်းဆုံးတော့ ရီးရဲလ်နဲ့ တွေ့ရရင် ၁-ဝ ဂိုးနဲ့ နောက်ကလိုက်ကစားရတာ မျိုး ထပ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ သူဟာ အသင်းကို နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုရောက်အောင် ပို့ဆောင် နိုင်မယ့်ကစားသမားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းရဲ့ရည် မှန်းချက်က ယှဉ်ပြိုင်သမျှပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာ ဗိုလ်စွဲနိုင် ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဘိုနူချီက ၂ဝ၁၇ တွင် အသင်းမှထွက်ခွာ ခဲ့စဉ်က စိတ်ခံစားချက်များဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါသစိတ်ဖြင့်ပြုလုပ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ အမြဲ တမ်းမမှန်ကန်နိုင်သည်ကို သိနားလည်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖျော်ဖြေနေစဉ် ပရိသတ်များ၏ ရမ်းကားမှုကြောင့် လူရွှင်တော်တစ်ဦး မျက်လုံး ကျွတ်ထွက်စေခဲ့ခြင်း?
ဂျပန်စာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲကို ရန်ကုန် နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်တွင် ၁၈ဝဝ ကျော် လာရောက်ေ?
”တခြား ထုတ်လုပ်ရေးတွေက ဇာတ်ကားတွေ သိန်းလေးငါးထောင် မြတ်နေတာ အားကျပေမယ့် မခိုင်တို့ ထုတ်လု??